Amanqaku ka-Ajoy Krishnamoorthy kwi Martech Zone
Amanqaku ngu Ajoy Krishnamoorthy
U-Ajoy uneminyaka engaphezu kwe-15 yamava kolu shishino kubuchwephesha, kwintengiso nakwindima yobunkokeli. Phambi kwe-Acumatica, u-Ajoy wayeseMicrosoft eqhuba ngempumelelo yeshishini kuluhlu olubanzi lolawulo lwemveliso kunye neendima zokuthengisa kutshanje esebenza njengoMlawuli wecandelo leNtengiso ye-OEM apho yena neqela lakhe babenoxanduva lwesicwangciso sokuya kwintengiso kubaphulaphuli bezentengiso nabathengi. .
Kutheni amaQela okuThengisa nokuThengisa efuna i-ERP yamafu
NgoLwesibini, Oktobha 6, 2020 NgoMvulo, Oktobha 5, 2020 Ajoy Krishnamoorthy
Iinkokeli zentengiso kunye nezentengiso zizinto eziyimfuneko ekuqhubeni ingeniso yenkampani. Isebe lezentengiso lidlala indima ebalulekileyo ekukhuthazeni ishishini, ekuchazeni okunikezelwayo, nasekumiseni umahluko. Ukuthengisa kukwavelisa umdla kwimveliso kwaye kudala izikhokelo okanye amathemba. Kwikonsathi, amaqela okuthengisa ajolise ekuguqulweni kwethemba kubathengi abahlawula. Imisebenzi inxibelelene ngokusondeleyo kwaye ibalulekile kwimpumelelo yeshishini. Ngenxa yempembelelo yentengiso kunye nentengiso kwi